Migrationsverket:Diiwaanka dambiyada oo la baaro waxaa ku nabad gelaya dumarka dibadaha laga soo guursado. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Migrationsverket:Diiwaanka dambiyada oo la baaro waxaa ku nabad gelaya dumarka dibadaha laga soo guursado.
La daabacay fredag 1 mars 2013 kl 10.50
Waaxda socdaalka Iswiidhan ee Migrationsverket ayaa dooneysa in ay baaritaan ku sammeyso diiwaan dambiyeedka ragga dibedaha ka soo guursada ka dibna xaaska keenna Iswiidhan si ay halkani ugu wada noolaadaan.
Hay’adda socdaalka ayaa xitaa dooneysa in ay eegto xaalada raga hore u soo maray guurka ee Iswiidhan ee dumarka ay soo guursadaan halkii ay ka heli xiriir jaceyl,u geysan kara dhibaato iyo rabshad iyada oo baaritanada hadda la kordhin doono.
Waaxda socdaalka ee Migrationsverket ayaa hadda dalbaneysa baaritaanka diiwaanka dambiyada ee dhammaan raga soo guursada dumarka shisheeyaha si looga hortago dhibaato dhacda.
Håkan Jonsson oo ka tirsan hay’adda socdaalka ayaa ayaa sheegay in ay hay’ada dooneyso in ay ka hortagto dhibaatada inta aysan dhicin oo ninka dibeda ka soo guursanaya aysan noqon in dumarka halkan uu ku dhibaateeyo.
Hay’ada Migrationsverket ayaa dooneysa in ay baartodiiwaan dambiyeedka raga horay u soo guursaday iyo kuwa hadda doonaya in ay ka soo guursadaan dibeda .
Wareegto isu keenista qoyska oo Iswiidhan ka soo baxday toban sano ka hor ayaa waxay aheyd mid keliya ka dalbaneysay dadka aan hore u soo guursan in la baaro diiwaan dambiyeedkooda.
Laakiin Migrationsverket ayaa hadda doonaya in la balaariyo oo lagu soo daro xitaa kuwa hore u soo maray guur si loo badbaadiyo dumarka dibedaha laga soo guursado.